VideoHere: Gbakwunyea vidiyo n'ime ngwa ọ bụla | Martech Zone
Tuesday, January 19, 2010 Douglas Karr
Otu n'ime ụlọ ọrụ amara nke m na-arụ ọrụ bụ Kantalup. Ha nwere ngwaahịa di egwu a na-akpọ Chegharịa na anyị ga-anabata vidiyo anyị na. Usoro a na - enye ezigbo mma maka ị nweta vidiyo na ntanetị gị, na - enye gị ikike maka vidiyo ndị ahụ, ma nwee ihe jikọrọ njikọta nke na - enye gị ohere itinye njikọ dị na usoro iheomume vidiyo gị. Jikọtara ya na ụfọdụ nnukwu vidiyo nchịkọta, Ọ bụ a siri ike ngwugwu!
Ndị ukwu nọ na Cantaloupe amalitela ugbu a Video ebe a (pịa ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịlele vidiyo ahụ):
Video ebe a bụ usoro vidiyo dị n'ịntanetị ị nwere ike itinye na ngwa weebụ ọ bụla na obere ọrụ mmepe, enweghị API, na enweghị ntinye ego IT. Ndị ọrụ gị nwere ike ịkọwa ma pịa ka bulite, hazie, ma tinye vidiyo na ntanetị n'ime njirimara ọrụ gị. Ọ bụ dị ka na-enye gị ahịa ha onwe ha online video n'elu ikpo okwu n'ime gị ngwa.
VideoHere nwekwara ike ahazi ka ọ rụọ ọrụ ozugbo na akaụntụ Backlight gị - ọ bụ sistemụ dị mfe nghọta. M na-ahazi ya maka iji m blog na ọ na-ewe a click nke bọtịnụ bulite na embed a video n'ime m blog ugbu a…. enweghịzi i copomi na ịgafe koodu dị egwu! Ọ bụrụ na inwee usoro njikwa ọdịnaya, aga m akwado gị ka ịlele VideoHere dị ka ihe ọzọ iji mee mmepe gị.
Nke a bụ nseta ihuenyo nke ọ na-agba na blọọgụ m (n'ezie edeela m ngwa mgbakwunye iji tinye ya na ya!):
Tags: pịa ebe a iji nye iwuỌdịmmanwa afọ mgbasa oziỌgụgụ ọkọlọtọtextingWriting
Etu esi gha ada onu ogugu: Ihe omumu site na Twitter na Facebook